बाँदरको नाममा गरिदिइन सम्पत्ती, उसको मत्यु पछि घरमा बनाईन मन्दिर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बाँदरको नाममा गरिदिइन सम्पत्ती, उसको मत्यु पछि घरमा बनाईन मन्दिर
रोचक । आज हामी तपाईंलाई घरमा पालेको जनावर प्रति मानिसले कति सम्म स्नेह देखाउन सक्छ भन्ने एउटा रोचक समाचारका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।
एउटी महिलाले आफुले पालेको बाँदरको नाममा आफ्नो संपूर्ण सम्पती गरिदिइन् । गत वर्ष उक्त घरपालुवा बाँदरको मृत्यु भएपछि यी महिलाले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पती त्यो बाँदरको नाममा गरिदिएकी हुन् ।
गत वर्ष उक्त बाँदरको मृत्यु भएपछि आफ्नो घरमा उसको मंदिर पनि बनाउन लगाइन् । अनि हिजो मंगलबार मंदिरमा राम, लक्ष्मण, सीताको साथै बाँदरको मूर्तिको नाममा प्रतिष्ठा पनि स्थापना गरिन् ।
उक्त अवसरमा छिमेकी लगायत साधुसन्त हरुका लागि भोजको व्यवस्था पनि गरिन् । महिलाले आफ्नो घरको नाम पनि बाँदरको नामबाट चुनमुन रोखेकी छिन् । समाचार छिमेकी मुलुक भारतको रायबरेली भन्ने ठाउँकोे हो ।
साबिस्ता बृजेश नाम गरेकी कवियित्रीले उक्त बाँदर सन २००५ देखि आफूसँग राख्दै आएकी हुन् ।
साबिस्ता मुस्लिम हुन् तर पनि आफ्नो घरमा मंदिर बनाइन् । साबिस्ताका आमा बुवा हिन्दु हुन् । सबिस्ताले मुसलमान सँग बिवाह गरिन् । उनको सन्तान छैन । सन्तान नभएपछि उनले यो बाँदर तीन महिनाको हुँदा एउटा बाँदर नचाउनेसँग किनेकी थिइन् ।
चुनमुन हाम्रो निम्ति भाग्यशाली साबित भयो साबिस्ता भन्छिन् । यो हाम्रो घरमा आएसँगै हामिले लिएको श्रृण मात्रै तिरे नौ हामीले हाम्रो आर्थिक हैसियत पनि बलियो हुँदै गयो ।
साबिस्ताले बाँदरका लागि घरमा तीन वटा कोठाहरु विशेष तवरले सजाएर राखेकि थिइन् । चुनमुनको कोठामा एसी र हीटर जडान गराएकी थिइन् ।
आफ्नो सन्तान नभएपछि साबिस्ताले चुनमुनलाई आफ्नो छोरा मानेकी थिइन् । चुनमुनको नाममा एउटा संस्था खोलिन र आफ्नो संपूर्ण सम्पती उसको नाममा गरिदिइन् । सन् २०१० चुनमुनको बिबाह छिमेकी गाउँको अशोक यादव नामका व्यक्तिको बाँदरसँग गराई दिइन ।
सबिस्ता चुनमुनको बिबाह भएको दिन पारेर प्रत्येक वर्ष भोजको आयोजना गर्छिन ।